android ဖုန်းအခမဲ့ AppLock | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » AppLock - Privacy Guard ကို
AppLock - Privacy Guard ကို APK ကို
Privacy Guard ကို - တစ်စမတ် AppLock, သင့်ကိုအကောင်းဆုံး AppLock ပါ! တစ်ဦးကမဖြစ်မနေ-ရှိ AppLocker!
သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပါ။ အကောင်းဆုံး Privacy Guard ကို - AppLocker privacy ကိုသူငယ်ချင်းမိဘများသို့မဟုတ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အားဖြင့် snooped ခံသာစိုးရိမ်ပူပန်!? ကလေးတွေကပြောင်းလဲလျက်ရှိသည့်စနစ် settings ကိုစိုးရိမ်?
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို AppLocker နှင့် privacy အစောင့်ဖြစ် AppLocker - ကိုအကောင်းဆုံး AppLock Download! သင့်ရဲ့ privacy ကိုကောင်းစွာ password ကိုသော့ခတ် & ပုံစံသော့ခတ်နှင့်အတူ protected လိမ့်မည်!
Privacy Guard ကိုအတူ - AppLocker, သငျသညျထိုကဲ့သို့သော Facebook က, WhatsApp ကို, Snapchat, Messenger ကိုနှင့်ပြခန်း, ဖုန်း setting များကိုနဲ့ app စျေးကွက်အပါအဝင်သင်ရွေးချယ်မည်သည့် app ကိုအဖြစ် app များကိုသော့ခတ်နိုငျပါသညျ!
Privacy Guard ကိုအတူ Now ကိုသော့ခတ် apps များ - AppLocker, သင့်ရဲ့ privacy secure ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံရေး app တစ်ခု!
●သင့် privacy ကာကွယ်ပါ
applock နှင့်အတူပြခန်းနှင့်ဓာတ်ပုံ app များကိုသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို Hide ။
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို applocker နှင့်သင်၏လူမှုရေး app များကိုသော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပါ။ မျက်စိ prying မှသင်၏လူမှုရေးဒေတာလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်လော့။ လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး°သင့်ရဲ့ဖုန်းကို 360 ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ဖုန်းအတွက် App ကိုစျေးကွက်သော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ဂိမ်းများကိုဝယ်ယူရာမှသင်တို့၏သားသမီးထားပါ။ Privacy Guard ကိုသင့်ရဲ့ Pro ကို AppLocker ပါ!
Privacy Guard ကို - AppLocker app များကိုသော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တားဆီးနှင့် privacy ကိုစောင့်ရှောက်။ လုံခြုံရေးသေချာစေရန်!
● Install မော်နီတာ
သစ်တစ်ခု app ကို install လုပ်ပြီးချိန်တွင်တစ်သော့ခတ်အောင်အသိပေးပါ! ထိုအသင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်အကြောင်းကြားစာကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
pattern သော့ခတ် & password ကိုသော့ခတ် themes များအများအပြားအမျိုးမျိုးရှိသည်။ pattern သော့ခတ်သော့ဖွင့်ဖို့ပိုပိုမြန်သည်။ နှင့်ပုံစံသော့ခတ်၏ mode ကို, သင်လမ်းကြောင်းကိုဆွဲဖုံးကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ app များကိုသော့ခတ်ရန်အဘို့အတာပိုလုံခြုံ။
တဦးတည်းကလစ်တိုးတက်မှုနှင့်တကွ, အန်းဒရွိုက် Accelerator 50% အားဖြင့်ပိုမိုမြန်ဆန်ဖုန်းကိုစေမည် !!!
RAM ကိုတက်လွတ်မြောက်စေဖို့အားဖြင့်သင့်ဂိမ်းနှင့်အခြား app များကိုမြှင့်တင်ရန်,
ဖုန်း Booster & လုံခြုံရေး Lock ကို, နက်ရှိုင်းသောပါဝါသင်သည်သင်၏ device ကိုအရှိန်မြှင့်သွားကြဖို့ကိုရှေးခယျြမလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များသန့်ရှင်းရေး - Privacy Guard ကိုအတူ!
သင့်ရဲ့ဂိမ်းများနှင့် app များကိုမြှင့်တင်ရန်တစ်ခုမှာနှိပ်ပါ! သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအစွမ်းထက် Make! အကောင်းဆုံး AppLocker & လုံခြုံရေး Lock ကို !!
အားလုံးမဟုတ်အသုံးပြုမှုရှိနေစဉ်ပါဝါတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကြောင့် apps များအပေါင်းတို့နှင့်တကွ running app များကို '' ပါဝါစားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မြင့်မားသောစားသုံးမှု apps များအကြောင်းသင့်သတိပေးတယ်။ သင်ကစာရင်းအရသိရသည်ချွေတာတစျခုကို click နိုင်ပါတယ်။
hibernating ပြီးနောက်, သင့်ဘက်ထရီကြာကြာကြာရှည်စေ! သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘက်ထရီ Saver & ဖုန်းကိုသန့်စင်!
တိကျစွာကျန်ရှိသောတာဝန်ခံအချိန်ခန့်မှန်းအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် display တာဝန်ခံအခြေအနေ, ။ အစွမ်းထက်ဘက်ထရီ ++ & မတ်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်!
●အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း - Smart Lock ကိုမျက်နှာပြင်
သင်သည်သင်၏ဖုန်းကို, အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း app ကိုအားသွင်း start တဲ့အခါမှာ - Smart Lock ကိုမျက်နှာပြင် activated လိမ့်မည်။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းအားသွင်း app ကိုနောက်ခံ running အားလုံး apps များကိုသတ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော wifi, 3G, မိုဘိုင်းအင်တာနက်အဖြစ်ဘက်ထရီန်ဆောင်မှုများစားသုံး ... ဒါကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းစေမည်။
အစွမ်းထက်မြန်ဆန်စွာအားသွင်းများ၏မြန်နှုန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုးမြှင့်မသာ app ကိုအားသွင်း။
AppLock - AppLocker နေရာ 2MB ထက်လျော့နည်းကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အစွမ်းထက်အဆင့်မြင့် function ကိုသင်တို့အဘို့အားလုံးအခမဲ့များမှာ!
●အသုံးပြုသူဖော်ရွေ UI ကို
AppLock - AppLocker, တစ်ဦးစမတ် privacy ကိုအစောင့်, လုံခြုံရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး°သင့်ရဲ့ဖုန်းကို 360 ပေးသည်။
9.99 ကို MB
Cleaner & Booster & လုံခြုံရေး